Election Day Information in Multnomah County: Ballots Due Before 8:00 PM - Somali | Multnomah County
Election Day Information in Multnomah County: Ballots Due Before 8:00 PM - Somali
Macluumaadka Maalinta Doorashada Degmada Multnomah: Waraaqaha codayntu waxay ku aaddan yihiin 8:00 fiidnimo
Maanta oo ah Maajo 19, 2020 waa maalinta ugu danbaysa ee codaynta Doorashada Horudhaca ah. Waxaa waajib ah in aan helno waraaqaha codaynta marka la gaaro 8:00 fiidnimo ee caawa si loo tiriyo.
Waa xilli aad u danbeeya in boostada lagu diro waraaqaha codaynta, calaamadaha boostadana lama tirinayo.
Cod-bixiyeyaashu waxay kaliya isticmaali karaan goob kasta oo ah sanduuq waraaqaha lagu soo celiyo oo rasmi ah 24ka saac sidaa si lamid ah sanduuq kasta oo lagu soo celiyo buugta 24kii saac Maktabadda Degmada Multnomah si si amaan iyo badqab ah loo dhigo waraaqaha codaynta.
Si aad u hesho goobta kuugu dhow ee rasmiga ah ee waraaqaha codaynta la dhigo ama goobta dhigista ee maktabadda bookho: multco.us/dropsites.
Maanta oo ah Maajo 19, 2020 waa maalinta ugu danbaysa ee codaynta Doorashada Horudhaca ah.
Dhammaan cod-bixiyeyaasha diiwaan gashan ee Degmada Multnomah waa in ay helaan waraaqahooda codaynta. Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah ee u baahan waraaq codayn ama doonaya caawin waa in ay kasoo wacaan Doorashooyinka Degmada Multnomah (Multnomah County Elections) 503-988-VOTE (8683) si loo caawiyo.
Cod-bixiyeyaashu waxay khadka internetka ka dalban karaan badalaadda waraaqaha codaynta multco.us/orderahead, waxayna diyaar ku noqon doontaa in la soo qaado xafiiska weyn ee doorashooyinka ee ku yaalla SE Portland ama goobta Gresham. Goobaha Gresham iyo SE Portland labaduba waa ay furnaan doonaan ilaa laga gaarayo 8:00 fiidnimo ee caawa.
Bookho SE Portland iyo goobta Gresham si aad caawinaad u hesho.
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah waxa uu ku yaalaa 1040 SE Morrison Street, Portland 97214. Xarunta Degdegga ah ee Codaynta waxa ay ku taallaa gudaha Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah, cinwaankaasuna waa 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Labada xafiisba waxa ay u hogaansamayaan tilaabooyinka kala durugga uu soo rogay Gobolka Oregon iyo Xarumaha Xakamaynta iyo ka Hortagga Cudurrada (CDC).
Kuwaan hoos ku qoran khadka internet-kana ah (multco.us/dropsites) dhammaantood waa goobaha sanduuqa soo celinta waraaqaha 24kii saac ee rasmiga ah iyo goobaha Maktabadaha Degmada Multnomah. Helitaanka sanduuqyada waraaqaha lagu soo celiyo waxay dhammaanaysaa 8:00 fiidnimo caawa, Talaado, Maajo 19, 2020.
Sanduuqyada soo celinta waraaqaha codaynta ee rasmiga ah waa la faaruqin doonaa si joogto ah maalinta oo dhan si degdeg ah na 8:00 fiidnimo caawa.
Goobaha waraaqaha lagu soo celiyo ee 24ka saac ee rasmiga ah:
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay siinayaan tarjumaan luuqadeed, bilaash ah, qof kasta oo ugu baahan caawimaad hanaanka codaynta. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka kuna qoran sagaal luuqadood yaa khadka internet-ka looga heli karaa multco.us/education-and-outreach.
Cod-bixiyeyaasha soo celiyay waraaqahooda waa ay la socon karaan xaalka waraaqahooda, waxay heli karaan xasuusino, waxayna heli doonaan helitaanka istikarka humaagga ah ee “I Voted” ayagoo furanaya La soco Waraaqdaada Codaynta, (Track Your Ballot,) multnomah.ballottrax.net.
Iimayl: elections@multco.us | Websaydh: www.mcelections.org